जमेको काने गुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण ! – Online Nepal Site
भाइरल अलिफ खानको भूपू प्रेमिका मधु क्षेत्रि , खान भयकै कारण टाढियको खुलासा ( भिडियो )
धादिङमा ठक्करबाट घाइते महिलालाई एक्स्काभेटर चालकले जि’उँदै खाडल’मा पु’रेपछि..
काठमाडौ कोटेश्वरको सहकारीमा श्रीमानले ऋण तिरे, राती त्यही पैसा श्रीमतीले लुटिन्
२०७८ सालमा तीन दशैँ, असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी
यस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य, पाथिभारा माताको दर्शन गरि फागुन १८ गतेको राशीफल हेर्नुहोस्
अस्ट्रेलिया उड्न ठिक्क पारेको पैसाले ट्याक्सी किनेँका यी युवक भन्छन् – ‘मलाई अष्ट्रेलिया भन्दा आनन्द नेपालमा छ’
प्रविन बाँस्तोला ह’त्या प्रकरण: घ’रधनी रमेश गिरी पनि पक्राउ
श्वेता र धुर्मुस सुन्तलीको आलोचना भएपछि नायीका एलिजा भावुक हुँदै भन्छिन्, ‘म मागेर होइन कमाएर समाजसेवा गर्छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
भागरथी घटनामा दिनेश माथि हुँदैछ यस्तो परिक्षण, अदालतले दियो आदेश
आकाश र पूजाले गरे यसरी सुटुक्क बिहे ? (भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /Health/जमेको काने गुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
जमेको काने गुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
13,643 1 minute read
काठमाडौँ । शरीरको साथसाथै, कान सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन्। कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। कान सफा नगर्दा ठूलो रोगलाई निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने समस्या आइपर्छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यसले कान संक्रमणको खतरा पनि छ। अधिक फोहोरका कारण, हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाँही असहनीय पीडा महसुस हुन्छ। यदि तपाईले लामो समय सम्म आफ्नो कान सफा गर्नु भएन भने कान दुख्न थाल्छ साथै कम सुनाइदिन्छ पनि त्यसैले आज हामी तपाईलाई आफ्नो कान सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचारहरुको बारेमा बताउँछौं। यी विधिहरू प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च नगरी तपाईं आफ्ना कानहरू सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।
पहिले आधा कप तातो पानी लिनुहोस् र यसमा एक सानो चम्चा नुन मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा कपासको एउटा टुक्रा भिजाउनुहोस् र त्यस कपासको माध्यमबाट कपासमा भिजाएको पानीलाई कानमा निर्चोनुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि कि पानी राम्रोसँग भित्र जानुपर्दछ। त्यस पछि, कान फर्काउनुहस् र कानबाट सबै पानी निकाल्नुहोस्।
कानको फोहोर पनि बच्चाको तेलको सहायताले हटाउन सकिन्छ। यसका लागि, तपाईंले आफ्नो कानमा बेबि तेलको केही थोपा हाल्नुहोस् र कपास कपास लगाउनुहोस्। यसले छोटो समयमा तपाईको कानमा जमेको गरिएको कानेगुजीलाई नरम पार्दछ, ताकि कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँदछ।
समान मात्रामा हाइड्रोजन प्याराअक्साइड र केही थोपा पानी लिनुहोस् र कानमा राख्नुहोस्। जब यो कानमा राम्रोसँग जान्छ, केहि समय यसलाई छोडे पछि, कानलाई र्फकाउनुहोस् ताकि पानी बाहिर आओस्। ध्यान राख्नुहोस् कि हाइड्रोजन प्याराअक्साइडको मात्रा ३ प्रतिशत भन्दा बढि हुनु हुँदैन। कानको फोहोर पनि सजिलै यस प्रयोग द्वारा सजिलैसँग हटाइन्छ।
कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस्। करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले कानको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
जमराको जुस औषधी हैन, यी रोगका बिरामीलाइ त बिष नै हो
“होशियार ! धेरै विर्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ”(जानी राखौ) २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
कोरोना भ्याक्सिन विकासमा थाइल्याण्डको अद्भूत सफलता, विश्वका लागि जाग्यो आशा
विभिन्न २० मुलुकहरुले मगाए रुसले बनाएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन
कोरोनाका कारण पहिलो पटक कुकुरको मृत्यु !